Muxuu yahay Istaraatiijiyaddaada Soo-kabashada Macaamiil? | Martech Zone
Muxuu yahay Istaraatiijiyaddaada Soo-kabashada Macaamiil?
Tuesday, April 7, 2009 Isniin, February 8, 2016 Douglas Karr
Qoraallo badan ayaan ka hadlay “Hel, hayso oo kori” Istaraatijiyadaha shirkadaha ay ku kobciyaan ganacsigooda, laakiin hal dhinac uma maleynayo inaan waligay wax ka qoray soo kabashada macaamiisha. Tan iyo markii aan ku jiray warshadaha softiweerka, marar dhif ah ayaan arkay macaamiisha oo soo noqonaya sidaa darteed kumaanaan darin xeelado si aan isugu dayno inaan ku guuleysano macaamiil. Taasi maaha in la yiraahdo ma ahan in la sameeyo, in kastoo.
Waxaan joogaa shirka WebTrends Engage iyo agaasimaha guud Alex Yoder ayaa ka wada hadlay istiraatiijiyadaha oo aan ka soo kabsaday istaraatiijiyad afaraad. Ku dhawaaqida WebTrends inay iskaashi la leedahay Radian6 waxay tilmaamaysaa istiraatiijiyad adag oo soo kabasho ah - ma ahan oo keliya awoodda dhageysiga waxa macaamiisha ay sheegayaan, laakiin waa hawl socodsiin ficil ah oo loogu talagalay shaqooyin iyo mudnaan siinta ilaha warbaahinta bulshada (saameyn ahaan).
Waxaan ku nool nahay qiimo jaban, adduun mug weyn leh shirkaduhuna waqti adag ayey ku leeyihiin maareynta tiro macaamiil ah oo ku baahsan dhammaan warbaahinta aan la tirin karin. Nidaamyadani waa habab lagama maarmaan u ah inay si wax ku ool ah ula xiriiraan macaamiishaada, maareeyaan sumcaddaada iyo helitaanka rajo.
Si kale haddii loo dhigo, marka la isku daro, aaladaha ayaa u oggolaanaya shirkad in aysan si fudud u ilaalin sumcadeeda waqtiga-dhabta ah, laakiin sidoo kale isla markiiba uga jawaab celiso wadahadalka. Tani waa guul-u-macaamilidda macaamiisha iyo shirkadaha can macaamiisha ayaa ka faa'iideysan kara shabakaddooda iyo xiriirradooda si ay uga dhigaan shirkadaha inay dhagaystaan ​​iyaga, oo aan kaliya ku gabbanayn lambar 1-800 ah oo leh dardar aan dhammaad lahayn oo macaamiil xanaaqsan loo soo marsiinayo.
Si loo tijaabiyo habka, I tweeted ku saabsan WebTrends inta lagu gudajiray soo bandhigida iyo WebTrends 'iska leh Jascha Kaykas-Wolff ayaa kaliya iga heshay dhagaystayaasha inta lagu gudajiray Khudbadda waxayna i tustay xuska Twitter-ka ee iPhone-kiisa. Waxyaabaha qabow! WebTrends ayaa sidoo kale ku dhawaaqday Isweydaarsiga Furan - barnaamijkooda xogta furan ee siinaya macaamiisha helitaanka bilaashka ah ee xogtooda iyaga oo adeegsanaya API. Sida ay hadalka u dhigeen, "Waa xogtaada, yaan lagaa qaadin wax lacag ah!" (Aamiin!). Waxay sidoo kale bilaabeen shabakadooda horumarineed.
Qaarkood waxaa laga yaabaa inay ka walaacsan yihiin mugga xogta ganacsiyada ay ka ururinayaan macaamiishooda. Alex wuxuu sheegay mid ka mid ah shirkadaha uu wax ka iibsado iyo inay hayaan in ka badan 2,000 oo xog oo ku saabsan isaga. Kama walwalayo inta shirkadaha iga ogyihiin… Waxaan ka walwalsanahay inay u isticmaalayaan ama u isticmaalayaan macluumaadkaas si iila dhaqmayaan si ka fiican!
Ma leedahay xeelad soo kabasho oo loogu talagalay macaamiisha ka tagtay? Waxay umuuqataa in qof horeyba uga warqabayay badeecadaada, shirkadaada, iwm ay noqon karto macaamil weyn oo guuleysta… walina waxaa laga yaabaa inuu ka qiimo yaryahay helida macmiil cusub gebi ahaanba. Haddii aad tahay shirkad shirkadeed, waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad daawato bandhigga Radian6 oo aad si qoto dheer u eegto kanaga Analytics isdhexgalka si loo ogaado haddii ay dabooleyso baahiyahaaga.
Tags: alex yodersoo kabashada macaamiishahaynta macaamiishaJascha Kaykas-Wolffwebtrendsguuleysta macaamiisha
In Vegas toddobaadkan at WebTrends Engage
Maareynta Sumcadda oo leh Radian6
Apr 7, 2009 at 3: 09 PM
Waxaan jeclaan lahaa inaan goobjoog ka ahaado munaasabadda, sidaa darteed waad ku mahadsan tahay soo koobitaanka nuxurka iyo waliba qorista ku saabsan ku dhawaaqista iskaashiga WebTrends / Radian6.
Waan jeclahay aragtidaada ku aadan sida ay u soo bandhigto shirkadaha fursad weyn oo lagu wanaajiyo adeegga macaamiisha isla markaana si fiican loo dhageysto macaamiishooda, "kaliya laguma dhuunto lambar 1-800" sida aad u sheegto.
Shirkaduhu waxay fursad u leeyihiin inay noqdaan shaqsiyaad badan, wax ka qabta, oo ay dhisaan sinaan xiriirka macaamiisha siyaabo cusub oo dhan iyada oo loo marayo dhageysiga iyo ka jawaab celinta khadka tooska ah.
Apr 7, 2009 at 3: 45 PM
Aad baad ugu mahadsantahay inaad nala joogto Engage. In kasta oo aad tweeted ku deg degtay, uma maleynayo in qoraalkaagu u taagan yahay wax nooc ah.
Waxaan inta badan shaqadayda kusoo qaatay softiweerka / suuq geynta waxaanan dhihi doonaa istiraatiijiyadda soo kabashada macaamiisha ayaa muhiim u ah guusha muddada fog. Iyadoo aan loo eegin waxyaabaha aad iibiso, sumadda dhabta ah ee sumadda hoggaamineed waa sida ay ula dhaqmaan macaamiisha markay wax xumaadaan. Waa run annaga sidoo kale software-ka.
Qoraalkaaga waxaad ku xustay inaan ku helay oo aan kuugu muujiyey tweet-kaaga iphone-kayga. Waxay ahayd cod weyn, sidaa darteed ma aanan helin inaan sharraxo sheekada oo dhan. Waxa aan ku tusay waxay ahayd heeganka waqtiga-dhabta ah ee la iigu soo diray Webtrends Qiyaasta Bulshada oo ay ku shaqeyneyso Radian6. Waxaan u adeegsanaa aaladda kooxdeyda maanta waana jecel nahay; kooxda Radian6 waa wax laga cabsado inay la shaqeeyaan.
Waxaan uun ku dhacay inaan awoodo inaan u imaado oo aan idhaahdo halkii aan ka samayn lahaa dijital ahaan :)